Impi yekhwalithi yosesho lwe-Google | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 15, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
SEO.com ukhiphe i-infographic emizameni ye-Google yokuhlinzeka ngemiphumela yokucinga esezingeni eliphakeme. Kubukeka okuthakazelisayo emuva emizameni esemqoka eyenziwe yiGoogle ukulwa namasayithi emiphumeleni yokulawula engafanele. Yize lokhu kungahle kubonakale sengathi kungakuthinta wena, empeleni kuyakwenza. Ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho noma amasayithi amaklayenti akho alandela izindlela ezihamba phambili zezinjini zokucinga kubalulekile.
Nakhu ukwehlukaniswa komlando kusuka kufayela le- SEO.com okuthunyelwe:
Ukuvuselelwa kwePanda (Februwari 2011) - IGoogle yahlasela amapulazi wokuqukethwe namasayithi ayenekhwalithi ephansi, okuqukethwe okuncane noma okusikiwe. Ukugxila kwabekwa kokuqukethwe okuhlukile nokujula kokuqukethwe. Amawebhusayithi amaningi athintwe yisibuyekezo. Amapulazi amaningi wokuqukethwe athola kanzima. Ukuvuselelwa kwePanda kukhishwe ngezinyathelo eziningana unyaka wonke.
Isibuyekezo seMayday (Meyi 2010) - I-Google yethule isibuyekezo esigxile kuthrafikhi yomsila omude.
Ukuvuselelwa Kwe-caffeine (Agasti 2009) - Ukuvuselelwa kugxile kwingqalasizinda ukuvumela iGoogle ukuthi ikhombise imininingwane engcono ku-inthanethi, futhi ikwenze ngokushesha okukhulu. Inike amandla ukucutshungulwa okujulile, okuvumela i-Google ukuletha imiphumela ehambisana kakhulu yosesho. Lesi sibuyekezo sigcine sivumele i-Google ukuthi yethule isivinini sekhasi njengesici sokuma.
Ukuvuselelwa kukaPluto (Agasti 2006) - Isibuyekezo sigxile kuma-backlink abikwe yi-Google. Azikho ushintsho olukhulu emiphumeleni yenjini yokusesha.
Ubaba omkhulu (Februwari 2006) - IGoogle igxile kuzixhumanisi ezingenayo neziphumayo. Amasayithi anokuthembela okuphansi kakhulu kuzixhumanisi, noma axhumene namasayithi amaningi ogaxekile abone amakhasi enyamalala enkombeni. Amasayithi wogaxekile ahanjiswe esigabeni esengezelelayo emiphumeleni yosesho. Abasebenzisi baqaphele ukuthi noma ngemuva kokuhambisana nosizo lweGoogle ukuthi amawebhusayithi abo abesaqhubeka nokwengeza.
Ukuvuselelwa kweJagger (Okthoba / Novemba 2005) - AbakwaGoogle bakhuthaze abasebenzisi ukuthi banikeze impendulo maqondana namawebhusayithi asebenzise amasu we-SEO hat entsha ukubeka kahle. Amasayithi atholakele ukuthi asebenzisa amasu anjalo asusiwe emiphumeleni yokucinga. I-Google ihlanze izinkinga ze-canonical futhi yagxila ekubalulekeni kokuxhumanisa okuphindayo.
Ukuvuselelwa kwe-Allegra (Febhuwari 2005) - Lokhu bekungumzamo we-Google wokukhomba amasayithi ogaxekile asaphumelele ukubeka ezingeni eliphezulu emiphumeleni yokucinga. I-Google icele abasebenzisi ukuthi banikeze impendulo ngamasayithi empeleni afanelwe amazinga aphezulu kepha awatholanga. Abasebenzisi bakhala ngokuthi amasayithi abo anyamalale emiphumeleni yokucinga nokuthi amanye amasayithi ogaxekile asabalwa kahle.
Ukuvuselelwa kweBourbon (Meyi 2005) - I-Google yethule lesi sibuyekezo ngokuphendula izikhalazo zogaxekile nezicelo zokufaka kabusha. Izinguquko zamasu enqubeni zisetshenzisiwe ukuze zisebenze kangcono. Isibuyekezo siphinde sagxila ekuhambeni kusuka ezikhungweni zedatha ezindala kuye kwezintsha.
Isibuyekezo seBrandy (Februwari 2004) - IGoogle yagcizelela kakhulu amagama anjengokwethemba, igunya kanye nedumela. Ukuvuselelwa kukhombisile ukuthi ukuhlinzeka ngemininingwane efanele kuyisihluthulelo. Kube nokubaluleka okukhulu okubekwe kwikhwalithi yokuqukethwe kuwebhusayithi. IGoogle iphinde yagcizelela ukubaluleka kweLatent Semantic Indexing.
Ukuvuselelwa kuka-Austin (Janawari 2004) - Isibuyekezo sigxile enkambisweni ebizwa ngeGoogle Bombing, lapho abantu basebenzise khona uhlelo ukukhiqiza imiphumela edukisayo. Ukugxila kudluliselwe kumasayithi anokuqina okuncane kwegama elingukhiye nokuxhumanisa okuhle kwangaphakathi. Izixhumanisi ezifanele zanikwa isisindo esengeziwe kulawo masayithi axhumene namanye amasayithi embonini efanayo enza kangcono emiphumeleni yosesho.
Ukuvuselelwa kweFlorida (Novemba 2003) - Ukuvuselelwa kukhombise ukuguquka kweGoogle kusuka kuzihlungi ezilula kuya emzameni wokuqonda ngokomqondo ubukhulu bosesho nemiphumela yokusesha engahle ibe khona. Isibuyekezo sihlanze ogaxekile ngokuxhumanisa okulula nezinye izici ezinikeze isisindo esithe xaxa kumasayithi enzelwe kahle futhi axhumene ngokuhlanzekile. Abaphathi bewebhu bakwamukele ukuvuselelwa futhi kukhombisile ukuthi iGoogle ibibeka phambili izintshisekelo zabaseshi. Ukuvuselelwa bekuyimizamo yokukhuthaza amawebhusayithi wesigqoko esimhlophe, ahambisana nezidingo zekhwalithi.
Ukuvuselelwa kwe-Esmerelda (Juni 2003) - Okwesithathu ochungechungeni lwezibuyekezo ezinikeze ukuthanda amakhasi abenikeza imininingwane ethile kuvakashi. Ukuvuselelwa kuveze ukuthi amakhasi angaphakathi kuwebhusayithi angahle abe nokusebenzelana okungcono nokuvuselelwa kweDominic, obekubonakala kunika ithuba ikhasi eliyisiqalo ngisho nokuseshwa obekuqondiswe embuzweni othile. Abasebenzisi babike ukuthi ugaxekile ubungaphansi kakhulu kunangemva kokubuyekezwa kweDominic neCassandra.
Ukuvuselelwa kweDominic (Meyi 2003) - Lesi sibuyekezo saqanjwa ngegama lendawo yokudlela i-pizza eBoston eyayivakashelwa kaningi ababekhona ePubCon. Isibuyekezo sigxile ekwenzeni inqubo yokusesha itimu isuselwe, nokuxhumanisa isikhungo sedatha kusesho oluthile. Ukuvuselelwa kwenze kwacaca ukuthi isikhungo ngasinye sedatha senzelwe ukwenza izinto ezihlukile.
Ukuvuselelwa kweCassandra (Ephreli 2003) - Lesi sibuyekezo sigxile ekuhlobaneni kwegama lesizinda. Umqondo bekuwukuthi izinkampani kufanele zikhethe igama elibonisa igama lesizinda sazo.
Ukuvuselelwa kweBoston (Mashi 2003) - Isibuyekezo seBoston sigxile kuzixhumanisi ezingenayo nokuqukethwe okuhlukile. Umphumela waba ukuthi abaphathi bewebhu abaningi babike ukwehla kwama-backlinks kanye nokwehla okuhambisanayo ku-PageRank.